Bogga ugu weyn Waa maxay Kasbashada? Qeexid, dulmar, iyo sida ay u shaqeyso
In kasta oo aan la qiyaasi karin in ganacsiga la hubo laga bilaabo dhalashada, in la galo meherad iyo in la daboolo marka shaki la'aan yimaado waa farxad. Mid ka mid ah milkiile ganacsi iyo hal-abuure kasta ayaa raba. Kasbashada ayaa dammaanad qaadaya nicmadan.
Ka-soo-baxa waa hal dukumeenti damaanad qaadaya heerkan amniga ilaa xad. Dukumeentigani wuxuu ku yimaadaa anfaca wuxuuna aad faa'iido u leeyahay xaaladaha ay tahay in shirkaduhu ku biiraan.
Maqaalkan, waxaanu ku siin doonaa kala qaybsanaan ku saabsan kasbashada waxa ay tahay, qeexid, dulmar, iyo sida ay u shaqeyso.
Hubi in aan akhriyay qoraalkan ilaa dhamaadka maadaama ay noqon doonto mid wax ku ool ah oo aqoon leh.
Aan ku bilowno inaan sharaxno waxa ay tahay kasbashada
Waa maxay Dakhliga iyo sidee buu u shaqeeyaa?
Kasbashada waa erey qandaraas ah oo sheegaya in haddii ganacsigu gaaro yoolal maaliyadeed oo gaar ah, sida boqolkiiba wadarta iibka ama dakhliga, iibiyuhu wuxuu heli lahaa mushahar dheeraad ah mustaqbalka.
Bixinta dakhliga ayaa la isticmaali karaa haddii ganacsadaha isku dayaya inuu iibiyo ganacsi uu weydiiyo qiimo ka sarreeya inta iibsaduhu doonayo inuu bixiyo. Tusaale fudud, $1 milyan qiimaha iibka ayaa lagu dari karaa 5% wadarta iibka saddexda sano ee soo socota.
Kasbashada, oo sidoo kale loo yaqaan kasbashada, waa habka binta ee loo isticmaalo isku darka iyo iibsiga taas oo iibiyeyaashu ay tahay inay "kasbadaan" qayb ka mid ah qiimaha iibka oo ku salaysan waxqabadka ganacsiga ka dib iibsashada.
Dakhliga soo gala laguma xukumo xeerar adag oo degdeg ah. Taa beddelkeeda, qaddarka lacag bixinta waxaa lagu go'aamiyaa arrimo kala duwan, oo ay ku jiraan cabbirka shirkadda.
Tan waxa loo isticmaali karaa in lagu xidho farqiga u dhexeeya rajada iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha.
Sababtoo ah waxay ku xidhan tahay waxqabadka maaliyadeed ee mustaqbalka, kasbashada waxay ka caawisaa iibsadaha inuu yareeyo hubanti la'aanta.
Iibsaduhu waxa uu hore u bixinayaa qayb ka mid ah kharashka meheradda, iyada oo inta hadhay ee ku jirta shuruudaha hawl qabad ee mustaqbalka la gaadhay. Waqti xaddidan, iibiyuhu sidoo kale wuxuu goosanayaa abaalmarinta horumarka mustaqbalka. Dakhliga soo gala waxa lagu go'aamin karaa shuruudo maaliyadeed oo kala duwan, sida dakhliga saafiga ah ama dakhliga.
Baro Sida Loo Bilaabo Ganacsi Qorshayn Maaliyadeed 2022
Heshiisyadani waxay socon karaan ilaa shan sano, iyada oo lacag-bixinuhu u dhexeeyaan toban ilaa soddon boqolkiiba qiimaha iibsiga ganacsiga. Qaybtu waxay noqon kartaa ilaa kala badh qiimaha iibka xaalado dhif ah.
Hadafyada dakhligoodu waxay ku salaysnaan karaan cabbirro kala duwan, sida dakhliga guud, dakhliga saafiga ah, dakhliga, socodka lacagta caddaanka ah, iyo iibsiga macaamiil cusub.
Bartilmaameedyada waxay sidoo kale tixraaci karaan dhamaystirka mashruuc ama hawlgal la bixiyay, xidhitaanka iib gaar ah, ama soo saarista badeecada.
Faham khataraha haddii aad ka fekereyso inaad heshiis dakhli ku hesho iibsadaha shirkaddaada. Weli waxaa lagugu shaqayn doonaa shirkad aanad lahayn, mana samayn doontid doorashooyin ganacsi oo muhiim ah. Dakhligaaga ayaa halis geli kara haddii iibsaduhu sameeyo go'aamo ganacsi oo khatar ah ama liita.
Qodobada aan tartanka ku jirin waxay ku badan yihiin heshiisyada kasbashada, kaa horjoogsanaya inaad bilowdo ama ku biirto ganacsi la mid ah.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Lacagta Markii Ugu Horreysay
Si loo ilaaliyo danahaaga, la shaqeyso qareenka isku-dhafka iyo iibka xilliyeed si aad u hesho lacagta ugu sarreysa ee suurtogalka ah.
Hubi in heshiisku si faahfaahsan u qeexayo dhammaan yoolalka dakhli kasbashada lagama maarmaanka ah. Hubi inaad leedahay qandaraas shaqo oo adiga kuu gaar ah si milkiilaha cusub uusan ku cayrin ama hoos kuugu dhigi karin.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad gabi ahaanba iska iibiso shirkaddaada, laakiin helitaanka iibsade ku heshiiya qiimaynta ganacsigaaga iyo rajada mustaqbalka way adkaan kartaa.
Heshiiska dakhliga, waxaad horay u heli doontaa lacag-bixin hal mar ah iyadoo ay suurtogal tahay inaad lacag badan hesho haddii bartilmaameedyada maaliyadeed qaarkood la fuliyo.
Xaaladda ugu fiican, iibsadaha iyo iibiyaha labaduba waxay ka faa'iidaystaan ​​xaalad guul-guul ah. Iyada oo iibiyuhu uu helayo qiimo caddaalad ah ganacsiga oo ay suurtogal tahay in lacag dheeraad ah la helo. Iibsaduhu wuxuu bixin karaa waxa uu aaminsan yahay in ganacsigu u qalmo, oo leh lacag-bixinno dheeraad ah oo ka dhashay natiijooyin maaliyadeed oo guuleysta.
Heshiisyo badan oo kasbashada ayaa u baahan iibiyaha inuu la joogo shirkadda ilaa ay ka dhammaato muddada dakhliga.
Yay tahay inay ka gorgortamaan Shuruudaha Heshiiska Kasbashada?
Marka ay timaado iibinta ganacsiga, si looga fogaado khilaafyada xiritaanka ka dib, iibsadaha iyo iibiyuhu waa in ay hubiyaan in wakiilladooda ay si buuxda u fahmaan hawlaha shirkadda iyo socodka lacagta caddaanka ah.
In kasta oo aysan ahayn wax aan caadi ahayn in dilaal ganacsi ama dhexdhexaadiyaha M&A uu gorgortan ku galo iyaga oo matalaya macaamiishooda, la-taliyayaashani waa dhif in ay si fiican u fahmaan hawlaha iibiyaha.
Sidoo kale, iyadoo qareennada iibiyaha ay si fiican u yaqaaniin sharciga wax kala iibsiga, marar dhif ah ayay si fiican u fahmaan dhaqaalaha shirkadda wax iibinaya.
Natiijo ahaan, mulkiilaha shirkadda iyo sarkaalkiisa ama sarkaalkeeda maaliyadeed waa in ay mas'uul ka yihiin ka gorgortanka shuruudaha iyo xaaladaha Lacag-bixinta Lacag-bixinta.
Iyadoo Earn Outs ay siin karto iibsadaha iyo iibiyaha labadaba maskax maskaxeed iyo magdhow cadaalad ah, waxay qaataan wakhti dheeraad ah si ay uga wada xaajoodaan, abuuraan, oo ay hirgeliyaan, waxaana laga yaabaa inay keenaan iibka guuldarada ama kharashyada dheeraadka ah ee iibsadaha ama iibiyaha, sida dacwooyinka iyo xisaab xidhka.
Taasi waa sababta ay inta badan fikrad fiican u tahay in la isticmaalo qareen khibrad badan u leh diyaarinta si fiican looga fikiray oo si sharci ah ugu dhaqma Heshiiska Kasbashada ee faa'iido u leh iibsadaha iyo iibiyaha labadaba.
Abuuritaanka qaab-dhismeed kasbashada
Markaad qabanqaabinayso dakhli, waxaa jira arrimo badan oo muhiim ah oo la tixgeliyo marka lagu daro bixinta lacagta caddaanka ah. Tan waxaa ka mid ah in la qiimeeyo in shakhsiyaadka ururka ka tirsani ay muhiim yihiin iyo haddii ay u qalmaan dakhli iyo in kale.
Laba qodob oo kale oo laga wadahadli doono waa muddada qandaraaska iyo ku lug lahaanshaha fulinta ee shirkadda ka dib iibsashada. Tani waa sababta oo ah waxqabadka shirkadu wuxuu ku xiran yahay maamulka iyo shaqaalaha kale ee muhiimka ah. Haddii shaqsiyaadkan ay joojiyaan, shirkadu waxaa laga yaabaa inay awoodi waydo inay gaarto yoolkeeda dhaqaale.
Malaha xisaabaadka ee mustaqbalka laga faa'iidaysan doono waa in lagu qeexaa heshiiska. Xitaa haddii shirkad ay raacdo mabaadi'da xisaabinta guud ee la aqbalay (GAAP), maareeyayaashu waa inay sameeyaan go'aamo saameyn ku leh natiijooyinka.
XIDHIIDHKA: Xisaabaadka Bangiga ugu Fiican Dhallinyarada Xiisaha Badan | 2022
Haddii loo qaato heer sare oo soo celin iyo gunnooyin, tusaale ahaan, waxay keeni doontaa dakhli yar.
Isbeddelka istaraatiijiyada, sida go'aaminta in laga tago shirkad ama maalgelinta mashaariicda kobcinta, waxay saameyn xun ku yeelan kartaa waxqabadka hadda jira.
Tani waa wax ay tahay in iibiyuhu ku baraarugo si loo helo xal cadaalad ah.
Waa lagama maarmaan in la doorto tilmaamayaasha maaliyadeed ee loo isticmaali doono si loo go'aamiyo dakhliga. Tallaabooyinka qaar ayaa faa'iido u leh iibsadaha, halka kuwa kalena ay faa'iido u leeyihiin iibiyaha.
Isticmaalka isku-darka cabbirada, sida iibka iyo cabbirrada faa'iidada, waa fikrad caqli-gal ah.
Waxaa jira la-taliyayaal sharci iyo maaliyadeed kuwaas oo kaa caawin kara habka oo dhan. Kharashka lataliyayaasha ayaa inta badan kor u kaca si la mid ah kakanaanta wax kala iibsiga.
Waa inaad barataa Waa maxay Caymiska Canshuurta ee Premium? Sidee U Shaqeeya
Waa maxay ujeeddada Lacag-bixinaha La Kasbado?
Lacag-bixinaha la-helay ayaa jira sababtoo ah waxaa jira farqi u dhexeeya waxa iibsaduhu doonayo inuu bixiyo mulkiilaha ganacsiga iyo qiimaha wax lagu waydiinayo.
Si wax kala iibsiga loo dhammeeyo, Lacag-helid-bixinta waxa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo farqiga u dhexeeya labada qiimayn. Marka iibsaduhu ku khilaafo faa'iidada iyo horumarka la saadaaliyay ee iibiyaha, Heshisyada Kasbashada ayaa la isticmaalaa.
Xaaladdan oo kale, shirkadu waa inay fulisaa yoolalka faa'iidada gaarka ah si iibsaduhu u siiyo magdhow dheeraad ah iibiyaha.
Labada xaaladoodba, waxaa muhiim ah in la xasuusto in Lacag-bixinta Ka-soo-baxa aan la dammaanad qaadin in la siiyo mulkiilaha ganacsiga ilaa heshiiska kasbashada si cad u sheego oo qodobbada heshiiska la raaco.
Axdiyada Dakhliga/Qodobada Ilaalinta
Dhinacyadu waxay ka wada xaajoon doonaan mas'uuliyadaha iyo axdiga badan ee iibsadaha si loo hubiyo in dakhliga la bixiyay oo la kordhiyo. Waa kuwan tusaalayaal ka mid ah noocyada qodobbada laga wada xaajooday:
Cadaalad iyo iimaan wanaagsan. Ugu yaraan, iibiyuhu wuxuu dalban doonaa iibsaduhu inuu si daacad ah ugu shaqeeyo ganacsiga uu helay oo uu ula dhaqmo si caddaalad ah.
Ma hubin meesha aad ku maalgelinayso lacagtaada, eeg: Meheradaha Dhaqaale Sameeya Isla markaaba 2022
Waxyeelo ama ficillo.
Iibiyuhu waxa uu inta badan uga baahan doonaa iibsaduhu in uu ogolaado in aanu qaadin waxqabadyo togan (ama uu ku guuldareysto in uu wax ka qabto) si uu uga fogaado ama loo dhimo lacagaha soo gala. Iibsaduhu waxa uu codsan doonaa in waajibaadka iibiyuhu ku koobnaado "dadaal ganacsi macquul ah."
Faa'iidooyinka Iyo Khasaaraha Ay Leedahay Dakhliga La Helo
Kasbashada, iibsadaha iyo iibiyaha labaduba waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo dib u dhac. Iibsadaha, haysashada wakhti dheer oo uu ku bixiyo shirkadda halkii mar la wada bixin lahaa waa faa'iido.
Intaa waxa dheer, haddii dakhligu aanu u weynayn sidii la filayey, iibsadaha loogama baahna in uu kharash gareeyo. Faa'iidada iibiyuhu waa suurtogalnimada inuu ku faafiyo canshuuraha dhowr sano, hoos u dhigista saameynta canshuurta iibka.
XIDHIIDHKA: Waa Maxay Maalgelinta Micro Oo Sideen U Bilaabaa?
Iibiyuhu waxa laga yaabaa in uu ku lug lahaado shirkadda muddo dheer, isaga oo doonaya in uu bixiyo kaalmo si kor loogu qaado dakhliga. Waxa kale oo uu u isticmaali karaa khibradiisii ​​hore si uu ugu socodsiiyo ganacsiga sida ay u arkaan inay ku habboon tahay. Tani waxay khasaare ku tahay iibsadaha.
Khasaaraha iibiyuhu waa in dakhliga mustaqbalka aanu ku filnayn, iyo dakhliga ka soo baxa iibka ganacsigu kuma filna.
Dakhliga soo gala wuxuu leeyahay dhowr cilladood oo muhiim ah. Waxay si fiican u qabtaan marka ganacsiga loo maamulo sidii loo qorsheeyay wakhtiga wax kala iibsiga. Taas oo kale, kumana habboona in ay dib u eegis ku sameeyaan qorshaha ganacsiga iyaga oo ka falcelinaya dhibaatooyinka mustaqbalka.
Iibsaduhu heshiisyada qaar ayaa laga yaabaa inuu awoodo inuu ka hortago yoolalka dakhli kasbashada in la fuliyo. Doorsoomayaasha dibadda ayaa sidoo kale laga yaabaa inay saameyn ku yeeshaan awoodda shirkadu si ay u gaarto yoolalka dakhligeeda. Caqabadahan awgood, iibiyeyaashu waxay si joogto ah uga xaajoodaan xaaladaha dakhli-helka iyagoo taxadar weyn leh.
Baro Sida Looga Sameeyo Lacag Ebay Ah Adoo Aan Waxba Iibin | Cusbooneysii 2022
Tusaalaha Wax Kasbashada
Shirkadda ABC waxay leedahay dakhli dhan $50 milyan iyo faa'iido dhan $5 milyan. Iibsaduhu wuxuu doonayaa inuu bixiyo $250 milyan, laakiin milkiilaha hadda wuxuu rumaysan yahay in tani ay hoos u dhigayso awoodda kobaca mustaqbalka ee shirkadda waxayna dalbanaysaa $ 500 milyan.
Lacag kasasho ayaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo farqiga u dhexeeya labada dhinac. Tanaasulka la aqbali karo wuxuu noqon karaa $250 milyan oo lacag caddaan ah oo horudhac ah oo lagu daray $250 milyan oo dakhli ah haddii iibka iyo faa'iidada ay gaadho $100 milyan daaqad saddex sano gudahood ah, ama $100 milyan haddii iibku kaliya ku dhaco $70 milyan.
Haddii aad akhriday maqaalkan ilaa heerkan, waxaan aaminsanahay inaad fahmi lahayd waxa la kasbado. Waxaan sidoo kale aaminsanahay inaad baran lahayd sida ay u shaqeyso. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, si naxariis leh hoos ugu dhiib faallooyinka. Farxad.
Waa maxay Deal-Cash oo dhan?
Heshiis lacag caddaan ah oo dhan waa mid shirkad ama hanti si buuxda loogu gato lacag caddaan ah.
Waa maxay Credit ganacsi?
Deynta ganacsigu waa nooc ka mid ah maalgelinta ganacsi ee u oggolaanaysa macmiilka inuu ku iibsado alaab ama adeegyo deyn oo uu siiyo bixiyaha wakhti dambe.
Sidee Iibka Gaaban uga Shaqeeyaa Guryaha Ma-guurtada ah?
Iibinta gaaban waxay dhacdaa marka mulkiilaha guriga ee ay haysato dhibaatooyinka dhaqaale uu ku iibiyo gurigiisa wax ka yar hadhaaga uu ku leeyahay daynta.
4. Waa maxay Bixinta Dadwaynaha Hore (IPO)
Habka bixinta saamiyada shirkad gaar loo leeyahay dadweynaha soo saarista saamiyada cusub waxaa loo yaqaannaa bixinta hore ee dadweynaha (IPO).
5. Maxay yihiin lacag bixinta?
Istaraatiijiyada ay adeegsadaan iibiyeyaasha iyo iibsadayaasha marka ay heshiin waayaan waxaa loo yaqaan 'cake-out'.
Waa lacag-bixin joogto ah oo uu iibiyuhu ka helo iibsadaha oo keliya marka bartilmaameedyada waxqabadka gaarka ah lala kulmo.
17 Hababka Hal-abuurka ah ee Lacag lagu Sameeyo 2022 - Ogow iyaga
10 Siyaabood oo Looga Abuuro Dakhli Dadban Lacag la'aan
Sida Looga Sameeyo Lacag Guriga Markaad Caruur tahay 2021 l15 ugu Wanaagsan…
Dib -u -eegista Groundfloor 2022: Sharci ama Fadeexad, Sida ay u Shaqeyso
Ma u aragtaa maal-gelinta hantida ma-guurtada ah inay tahay ikhtiyaar maalgashi? Markaa waxay u badan tahay inaad dareentay in aaladaha badankooda ay xaddidaan ka qaybgalka…
Sida Loo Dhiso Dhibcaha Ganacsiga 2022
Way ka sahlan tahay sidaad u malaynayso inaad ogaatid sida loo abuuro credit ganacsi si degdeg ah. Waxay u baahan tahay xoogaa cilmi baaris ah…
Maqaalkani waxa uu sharaxayaa dib u eegista maalgashiga ClinkApp, sida ay u shaqeyso, iyo haddii ay sharci tahay ama khiyaano.
Dunidu waxay tagtay crypto. Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waxay noqotay nidaamka cusub ee lacagta, iyo sida ay maalmuhu u socdaan,…
Waa maxay Qareenka Canshuuraha? Noocyada/Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato 2022
Sharcigu waa wax dadka intiisa badan aysan wax fikrad ah ka haysan, in dacwad la galo waa...